Jona 12, 2020 ny Facetime Guide Leave a Comment
1 Ny fomba fampiasana facetime amin'ny iPad – Download facetime for iPad facetime amin'ny iPad tsy miasa
2 FaceTime amin'ny iPad:
3 Ultimate Torolalana ho an'ny Hanomboka FaceTime amin'ny iPad:
4 Miverena amin'ny Face Time Feature eo Amin'ny I pad:
5 Ampiasao Face Time miantso iPad:
5.1 Tsindrio eo amin'ny Face Time matoanteny:
5.1.1 Toerana ny Required Contact:
6 Contact vaovao Panel
6.0.1 Toerana peo lahatsary na antso amin'ny voafantina fifandraisana:
6.1 Bebe kokoa avy amin'ny tranokalako
Ny fomba fampiasana facetime amin'ny iPad – Download facetime for iPad facetime amin'ny iPad tsy miasa
Misintaha Facetime ho an'ny iPad
Apple no nitondra ny tsara indrindra foana noho ny mpanjifa. Manana fanamafisana hatrany mba hanomboka ireo rindrambaiko fampiharana na izay afaka hitondra fahasambarana sy ny tsy hanahirana ny mpanjifa. Ny fiantraikan'ny media sosialy dia manan- mihamafy amin'ny.
télécharger facetime for iPad
facetime for paoma iPad
facetime for Android ny iPad
facetime fampiharana ny iPad Download
Taona ny olona rehetra te-hijanona mifandray amin'ny tsirairay. Noho izany tanjona, Indrindra Apple namorona fampiharana ny mahafinaritra videotelephony mahalala araka FaceTime noho ny mpanjifa.
Io irery ihany fampiharana no natao ho an'ny rehetra mampiasa Apple mpampiasa iPhone, Mac, iPod, ary iPad. Anisan'ireo fitaovana hafa rehetra ny Apple, olona tia mampiasa ny iPad. Ny efijery midadasika kokoa sy ny kalitao tsara vokatry mamela ny mpividy mba hanonitra ny endri-javatra sy ny fampiharana miavaka raha ampitahaina amin'ny hafa fitaovana.
Azonao atao ny mampiasa FaceTime amin'ny iPad hanana fomba fijery midadasika kokoa ny lahatsary antso. Ity lahatsoratra ity hiteny anao ao an-lalina ny dikan'ny, downloading, fametrahana, fampiasana, ary ny mampiavaka Face Time ho an'ny iPad.
FaceTime dia mahagaga lahatsary sy feo antso tamin'ny voalohany fampiharana izay noforonina ho an'ny iPhone4, fa ambony fitakiana nanery Apple mba ataovy azo iPad mpampiasa ihany koa. iPad manome anao lafiny isan-karazany, fa ny iray amin'ireo endri-javatra manintona indrindra dia afaka mora foana na peo lahatsary mametraka antso amin'ny alalan'ny FaceTime.
Azonao atao ny mampiasa ny Face Time mba hahazo mifampitohitohy amin'ny Mpampiasa iray hafa izay manan-iPad amin'ny MAC OS 10.6.6 na tatỳ aoriana dikan-. Ianao fotsiny ny mahita izany olona izany ny Apple amin'ny alalan'ny Id. Ny lahatsary sy ny feo antso amin'ny alalan'ny FaceTime dia maimaim-poana tanteraka. Azonao atao ny mampiasa ny aterineto, na finday angona mba manomboka mametraka antso.
FaceTime amin'ny iPad:
FaceTime fampiharana no tena nomanina ho an'ny mpampiasa iOS anisan'izany iPhone, iPads, iPods, ary Mac. Ity fampiharana mamela anao hijanona nifandray rehefa lavitra ny fianakavianao, namana, raharaham-barotra, sy ny mpiasa.
Raha mitady mampiasa izany videotelephony rindrambaiko malaza amin'ny iPad, Dia aza manahy ianareo tsy voatery hanao na inona na inona. Apple Efa nametraka ny FaceTime App amin'ny iPads.
Mila anao fotsiny ny Apple ID hampavitrika io mialoha nametraka FaceTime fampiharana amin'ny iPads. Izany dia tsy maintsy ho mahaliana ho anao ny mahafantatra fa indray mandeha manana ny iPad, ianao vonona tsara ho avo-peo lahatsary na antso amin'ny alalan'ny FaceTime tsy misy hassles na lava dingana downloading.
Noho ny fanampian'ny FaceTime amin'ny iPads, dia afaka mora foana na mahazo manao voafetra lahatsary sy feo antso. Toy izany fampiharana ho an'ny iOS mpampiasa ihany, mba hahafahanao manao lahatsary ihany na telephony antso ho an'ireo mpampiasa izay mampiasa iPhone, Mac, iPod, ary iPad fitaovana. Afaka mametraka antso mivantana ny iPad mpampiasa amin'ny alalan'ny fampiasana ny mailaka ID izay matetika hita ao amin'ny lisitra fifandraisana.
FaceTime amin'ny iPad
Ultimate Torolalana ho an'ny Hanomboka FaceTime amin'ny iPad:
iPad 2 na tatỳ aoriana manan-in-nanao fakan-tsary izay manamora anao mba hitarika fampianarana amin'ny alalan'ny lahatsary miantso FaceTime. Izany fifandraisana fampiharana mamela anao miresaka ireo olon-tianao rehefa any lavitra azy.
Face Time amin'ny alalan'ny iPad manome endri-javatra rehetra, fa malaza tsy afaka hanitsy ny boky avy amin'ny fampiharana, ary koa tsy afaka manao fandraisam-peo ny antso lahatsary. Fa mbola, dia manome endri-javatra hafa rehetra ilaina izay mahatonga azy mifaninana mampiasa.
Miverena amin'ny Face Time Feature eo Amin'ny I pad:
Ny tena zava-dehibe dia, alohan'ny fampiasana Face ora ao amin'ny iPads, ho azo antoka fa efa niova ho amin'ny mialoha nametraka Face Time endri-javatra, dia afaka manao izany amin'ny alalan'ny:
Mandehana any amin'ny toe-javatra izay tsy ampy sakafo ny Home Page ny iPad.
dia, tsindrio eo amin'ny Face Time endri-javatra hampiakatra azy hampavitrika.
Azonao atao ihany koa manaraka ny dingana toy izany raha te-hiverina eny vetivety ny endri-javatra avy amin'ny iPad.
Tamin'ny toe-javatra sakafo ny iPad, ianao koa dia afaka mifidy ny lisitry ny fifandraisana rehetra izay tianao hatao mifandray amin'ny alalan'ny FaceTime. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fisafidianana ny adiresy e-mail sy ny telefaonina kaonty.
Ampiasao Face Time miantso iPad:
Afaka ihany no mametraka antso noho ny FaceTime hafa mpampiasa fitaovana Apple. Midika izany Afaka mahazo interlinked amin'ny alalan'ny Face Time amin'ny mpampiasa hafa izay mampiasa
iPad 2 na taty aoriana, na
Mac OS X mihazakazaka 10.6.6 na
iPhone4 na taty aoriana, na
Fahaefatra-taranaka iPod mikasika na taty aoriana
Alohan'ny niantso akory va ny fitaovana Apple mpampiasa, ho azo antoka fa efa nanampy azy ny iPad fifandraisana. Mametraka ny lahatsary na peo antso noho ny iPad dia awfully mora. Fotsiny ianao mba hanaraka dingana vitsivitsy ao anatin'izany.
Tsindrio eo amin'ny Face Time matoanteny:
Araka ny noresahina teo aloha, Face Time dia mialoha nametraka endri-javatra amin'ny iPads. Afaka mahita mora foana ny kisary eo amin'ny lamba an-trano ny iPads. Raha dia tsindrio eo amin'ny Face Time matoanteny, dia hanontany anareo mba hanome ny antontan-kevitra ilaina.
Ianao dia tokony hiditra ny e-mail sy ny nomeraon-telefaoninao ID izay tianao ny manomboka ny resaka. Rehefa tonga ny ilaina fifandraisana, fotsiny ianao tsy maintsy tsindrio eo amin'ny bokotra manaraka.
Toerana ny Required Contact:
Ary tamin'ny lamba tena fampiharana ny FaceTime, dia hahita ny lisitry ny fifandraisana izay hiseho eo amin'ny sisiny ankavanan'ny ny efijery. Rehefa ho hitanao ny tantaran 'ny mpampiasa izay te-hifandray, tsindrio eo fotsiny ny anarany.
Amin'ny fipihana eo ny anarany, dia afaka mahazo ny fampahalalana manan-danja izany mpampiasa. Ny lisitra maneho ny isa an-trano, nomerao finday, adiresy mailaka sy ny safidy toy ny anjara fifandraisana, Add to Favorites ary manakana izany mpiantso.
Contact vaovao Panel
Toerana peo lahatsary na antso amin'ny voafantina fifandraisana:
Rehefa ho tonga any amin'ny fanazavana izany mpampiasa manokana, anao fotsiny mba hitahiry ny, na ny isany na ny mailaka- adiresy. Tsy maintsy ihany no mitahiry fanazavana izay Inter-mifandray amin'ny Face Time.
Rehefa avy synchronization ny tahirin-kevitra ilaina, fotsiny ianao tsy maintsy tsindrio eo amin'ny bokotra ny lahatsary na feo antso. Ary dia afaka mahazo iray amin'ireo lahatsary tia miantso tolotra 'izao tontolo izao.
Noho izany etoana ny fanazavana dia manampy anao hanomboka sy hanao FaceTime amin'ny iPad izay asa mora hatao amin'ny manokana. Manantena aho fa ny tsipiriany nanampy anao hifandray amin'ny namana sy ny fianakaviana. Ataovy Zarao amin'ny namana sy ny fianakaviana mba ho afaka ihany koa ny mahafantatra ny fampiasana ny Face Time amin'ny iPad.
Ahoana ny fomba fampidinana sy fampiasana ny Facetime amin'ny PC
Misintaha WiseView ho an'ny PC (Windows 7, 8, 10 & Mac)
Wyze App ho an'ny PC – Download Ho an'ny Windows 7/8/10 ary Mac
Ahoana ny fametrahana sy ny fampiasana foto-tsarimihetsika amin'ny Mac
Ny fomba fampiasana Apple Watch Tsy Pairing ny iPhone
InShot Video Editor ho an'ny PC – Windows & Mac